စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: October 2015
ဒီနတေ့ော့ ကွာဇံဆီခကျြလေး လုပျစားဖွဈလို့ အိမျမှာလုပျစားတဲ့နညျးလေး မြှဝေလိုကျပါတယျ အိမျလုပျဆိုပမေဲ့ နံမညျကွီး ဆိုငျတှထေကျတောငျ အရသာက ပိုလို့တောငျ ကောငျးနပေါသေးတယျ။
အပွငျစာထကျ အိမျမှာလုပျစားရတဲ့ အရသာကို ပိုပွီးနှဈသကျတဲ့ မာမာတို့အတှကျတော့ နတသြုဒျဒါဆိုရငလြဲ မမှားပါဘူး။
၀ကသြားကှိတပြှီးသား - 350 g
ဆနျကွာဇံ - 150 g
ဆီ - ထမငျးပေါငျးအိုး ဆနျခငျြဗူး ၂ဗူး
ကွကျသှနျဖွူ - အမှာကွီးကွီး ၁၅မှာ
ကငျးမှနျငံပွာရညျ - လဖကျရညျ အကွမျးပနျးကနျ တဈလုံး
ဆား - လကျဖကျရညျဇှနျး တ၀ကျ
ကွကျသားမှုနျ့ - လိုသလောကျ
၀ကသြားကို ဆားလကျဖကျရညျဇှနျး တ၀ကျ ကွကျသားမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျး တ၀ကျတို့နှငျ့ ရောပွီးနယျထားပေးပါ
ကွကျသှနျဖွူ အမှာကွီးကွီး ၁၅မှာလောကျကို မညကျတညကျထောငျးထားပါ
ဒယျအိုးထဲမှာ ဆီကိုထညျ့ပွီး ဆီပူလာတာနဲ့ ကွကျသှနျဖွူထောငျးကို ထညျ့ကွျောပါ
ကွျောနစေဉျ အဆကျမပွတျမှပေေးပွီး ရှဝေါရောငျသနျးလာတာနဲ့ ကွကျသှနျကွျောမြားကို ဆယျပွီးအအေးခံထားပါ
ကွကျသှနျကွျောထားသော ဆီပူပူထဲကိုနှမျးမြားထညျ့ပွီး ကွျောပေးပါ
နှမျးစထေ့ညျ့ပွီး မိနဈဝကျလောကျနတောနဲ့ မီးပိတျပွီး လကျကနျြဆီအပူရှိနျနဲ့ နှမျးကို မှေးလာတဲ့ထိကွျောပွီး အအေးခံထားပါ
၀ကသြားကှိတသြားကို ကွကျသားမှူနျ့ ဆားနှငျ့နယျကာ ကှမျးသီးဆံ အလုံးလောကျလေးတှေ လုံးထားပါ
ရေ4cupsကို ဆူအောငျတညျပွီး ရပှေကျပှကျဆူလာတာနဲ့ ၀ကသြားလုံးမွားကို ထညျ့ပွုပျပေးပါ
၄မိနဈလောကျပွုပျပေးပွီး ဆယ်ကာ ရစေဈထားပါ
၀ကသြားလုံး ကျက်သွားပါက ခပျသေးသေးလေးတှေ လှီးထားပါ
ဆနျကွာဇံကို ရနောရီဝကျလောကျစိမျထားပွီး ရစေဈကာ ရစေဈထားသော ကွာဇံမြားကို ဇလုံတလုံးထဲထညျ့ပွီး ရနှေေးဆူဆူလောငျးထညျ့ပါ
ရနှေေးစိမျထားခြိနျ ၂မိနဈနရေငျ ရနှေေးစိမျထားသော ကွကာဇံကို ဇကာထဲသွန်ချပြီး ရနှေဈေထပျလောကျဆေးပွီး ရစေဈထားပါ
ကွကျသှနျဖွူကွျော နှမျး ကွျောပွီးသားကို ပွငျထားပါ
ကွကျသှနျမိတျကို ရဆေေးပွီး ခပျသေးသေးလှီးထားပါ
ငံပွာရညျနှငျ့ အရသာမှုနျ့ကို အဆငျသငျ့ပွငျထားပါ
ပွုပျထားသော ကွာဇံကို တပှဲစာယူပွီး ဇကာထဲထညျ့ကာ ရနှေေးထဲ ခနလေးစိမျပွီး ပွနျဆညျကာ ရစေဈပွီး ပနျးကနျထဲထညျ့ပေးပါ
အနတေျော လှီးထားသော ၀ကသြားလုံး နှဈသကျသလောကျ အရသာမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျး တ၀ကျ မွပေဲမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျး တဇှနျး နှမျးဆီခကျြ ထမျးစားဇှနျး ၂ဇှနျးခှဲ ငံပွာရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တ၀က်သာသာ ကွကျသှနျဖွူဆီခကျြ အဖတျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဇှနျးနှငျ့ ကွကျသှနျမိတျတို့ထညျ့ကာ ကွကျရိုးဟငျးခါး ကွကျသှနျခဉျြလေးတို့ နှငျ့တှဲဖကျကာ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
Posted by Tuumar at 7:47 am 1 comment:
ကွကျဥခဉျြရညျဟငျးကို အမြိုးမြိုးခကျြကာ စားကွတဲ့အထဲက ဒီခကျြနညျးလေးက ကွကျဥကို ကွျောပွီးမှ ပွနျခကျြတဲ့ နညျးလေးပါ ခကျြနညျးကတော့ ကွကျဥခဉျြရညျဟငျး ခကျြနညျးအတိုငျးပါဘဲ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ မာမာပွငျဆငျပွီး ကွကျဥကို အလုံးလိုကျ ဖောကျပွီး ကွျောထားကာ ခဉျြရညျဟငျး ခကျြနညျးလေးကို မြှဝေပေးလိုကျပါတယျရှငျ။
ကွကျဥ - ၆လုံး
အာလူး - အနတေျော သုံးလုံး
မနျကညျြးသီမှညျ့ အနှဈ - လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး
မဆလာ - လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျ
ဆီ - ထမငျးစားဇှနျး ၇ ဇှနျး
အာလူးကို အခှံခှာပွီး ရဆေေးကာ အနတေျော အစိတျလေးတှေ စိတျထားပေးပါ
ဒယျအိုးထဲမှာ ဆီကိုထညျ့ပွီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကွကျဥမြားကို တဈလုံးခွငျး ဖောကျကွျောပွီး အနှဈနှငျ့အကာ ကကျြသှားတာနဲ့ ဆယျထားပါ
ကွကျဥကွျောထားသော ဆီထဲမှာဘဲ ထောငျးထားသော ကွကျသှနျနီ ကွကျသှနျဖွူ ခငျြး ငရုတျသီးမှုနျ့ ထောငျးထားတာတို့ကို ထညျ့ကာ မှေးလာတဲ့ထိ ဆီသတျပေးပါ
ငရုတျသီး ဆီသတျနံ့ မှေးလာတာနဲ့ အာလူးကိုထညျ့ပွီး ငါးငံပွာရညျ တဈခါထဲထညျ့ကာ ဆီသတျပေးပါ
ငံပွာရညျနံ့ သငျးလာပွီး အာလူးအရောငျ ပွောငျးလာတာနဲ့ ရမွေုပျအောငျထညျ့ပွီး အရသာမှုနျ့နှငျ့ ဆားထဲ့ကာ အာလူးနူးအောငျ တညျပေးပါ
အာလူးနူးလာတာနဲ့ ကွကျဥကွျောပွီးသားကို အရငျထညျ့ကာ မကညျြးသီးမှညျ့ အနှဈထညျ့ပွီး ရဆေူအောငျ ဆကျတညျပေးပါ
ဆီကနျြရကေနျြ မိမိစိတျကွိုကျ အ​နေအထား ရလာတာနဲ့ အရသာမွညျးပွီး လိုသလို ပွငျပေးကာ မဆလာအုပျပေးပါ
ပွီးတာနဲ့ ကွကျဥကွျော ခဉျြရညျဟငျးကို စားသုံးရနျ ပွငျပေးနိူငျပါပွီ။
ငါးခြောက်ထဲမှာ ငါးယောင်ခြောက်ပြီးရင် အသားအများဆုံးက ကံ့ကူရံ ငါးခြောက်ပါဘဲ ဒီငါးခြောက်က မီးကင်ပြီး ဆီဆမ်းစားလဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ကြော်ပြီး ငရုတ်သီးအစပ်လေးနဲ့ ပြန်ကြော်လေး လုပ်စားလဲ အရမ်းကောင်းသလို ဆီကျန်ရေကျန် ချက်စားလဲ အဆင်ပြေတဲ့ ငါးခြောက်ပါ မာမာကတော့ ဒီတစ်ခါ ခပ်စပ်စပ်လေး ကြော်ဖြစ်သွားတာမို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငါးခြောက် - 400 g
ချင်း - လက်တဆစ် သာသာ
ငရုတ်သီး လုံးခြမ်းကွဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံးသာသာ
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀စ်က်
ငါးခြောက်ကို အကောင်လိုက်ရေ နာရီဝက်လောက် စိမ်ထားပြီး လက်တဆစ်အရွယ်လေးများ တုံးထားပါ
ဆီကို အပူပေးပြီး နနွင်းမှုန့်ထည့်ပါ
ငါးခြောက်ကို အရင်ဆုံး ကြွတ်သွားအောင် ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ
ငါးခြောက်ကြော်ထားသော ဆီထဲမှာဘဲ ကြက်သွန်နီကိုအရင် နွမ်းအောင်ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းမှကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်းကို ထည့်ကြော်ပါ
ကြက်သွန်များ အရမ်းမကြွတ်ခင် ငရုတ်သီးမှုန့် အချိုမှုန့်နှင့် ငံပြာရည်တို့ကို ထည့်မွှေပါ
ကြက်သွန်များ ကြွတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကြော်ပြီးဆီစစ်ထားသော ငါးခြောက်ကြော်ကို ရောမွှေပေးပါ
အေးသွားပါက ကြွတ်ပြီး မွှေးနေသော ငါးခြောက်ကြော် စပ်စပ်လေးကို မိမိနှစ်သက်သလို စားနိူင်ပါပြီ။
ဒီနေ့တော့ ပဲကြာဇံကို ချဉ်ငံစပ်လေး အသုပ်လေး သုပ်စားဖြစ်လို့ထမင်းနဲ့ဘဲစားစား ဒီအတိုင်းဘဲ စားစား အရမ်းကို ကောင်းလွန်းတဲ့ ပဲကြာဇံသုပ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် သုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
မှိုခြောက် - 30 g
ပဲအကျက်မှုန့်. - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ
ဆီချက် - ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ
ပဲကြာဇံကို ရေနာရီဝက်လောက် စိမ်ပြီး ရေနွေးပူပူနှင့် သုံးမိနစ်လောက် စိမ်ပေးကာ ရေစစ်ထားပါ
မှိုခြောက်ကို ရေတစ်နာရီခန့် စိမ်ပေးပြီး ရေစင်အောင်ဆေးကာ ရေနွေးပူပူနှင့် ၂မိနစ်လောက် ပြုပ်ပေးကာ အနေတော် လှီးထားပါ
ဂေါ်ဖီကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး ရေစင်အောင် ဆေးပေးကာ ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
အသုပ်သုပ်ရာတွင် ပါဝင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြင်ထားပါ
ဇလုံကျယ်ကျယ် တစ်လုံးထဲမှာ ပဲကြာဇံ မှိုခြောက် ဂေါ်ဖီ ကြက်သွန်နီ ပဲမှုန့် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆီချက် ငံပြာရည် ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် အရသာမှုန့် နံနံပင် သံပုရာရည်တို့ကို ထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွ နယ်ပေးကာ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ပါ
ပြီးတာနဲ့ အရသာ အလွန်ရှိလှသော ပဲကြာဇံသုပ် ချဉ်ငံစပ်လေးကို သုံးဆောင်ရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:51 am 1 comment:
ဂေါ်ရခါးသီးကြော် ကြွတ်ကြွတ်လေး ကြော်ဖြစ်လို့ ကြော်နည်းနဲ့အတူ ဂေါ်ရခါးသီးကြော်လေး ပို့ခဲ့ပါပြီ ကြော်နည်းက လွယ်လို့ ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ပန်းကန်ပြားပြန့်ပြန့်လေးပေါ်သို့ မုန့်နှစ်လူးထားသော ဂေါ်ရခါးသီးမုန့်နှစ်လူးကို တခုခြင်း ထဲ့ပြီးပြင်ပေးထားပါ
တစ်ဖက်ရွှေဝါရောင် သန်းလာပါက တဖက်ကို လှန်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 1:57 pm 1 comment:
ဘဲသားဆန်ပြုပ် ပြုပ်သောက်ဖြစ်လို့ ပြုပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ် ဒီဆန်ပြုပ်ကိုလဲ အရင်ပြုပ်ဖူးတဲ့ ကြက်သားဆန်ပြုပ်နည်းအတိုင်း ဆန်လှော်နဲ့ဘဲပြုပ်ထားပါတယ်။
မာမာတို့မိသားစုလေးယောက် တစ်နေကုန် ဆာရင်ဆာသလို သောက်နိုင်ဖို့ ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး၂ဗူးကို လှော်ပြီးပြုပ်ထားတဲ့ နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဘဲသား - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း ( ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ဘဲသားပြုပ်ထဲထည့်ရန်)
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်းခွဲ (တစ်ဝက်ကို ဘဲသားပြုပ်ထဲ့ထည့်ရန်)
ဘဲသားကို အခြမ်းလိုက် ရေဆေးပေးပါ
ရေဆေးထားသော ဘဲသားကို အိုးထဲမှာထည့်ပြီး အရသာမှုန့်နှင့် ဆားတို့နှင့်နယ်ကာ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ရေခမ်းတာနဲ့ ဘဲသားကို အသားမျှင်လေးတွေ ရအောင် ထွင်ထားပါ
ကြက်သွန်များပျော့ပြီး မွှေးလာပါက ဘဲသားများကိုထည့်ပြီး ၅မိနစ်လောက် ဆီသတ်ပေးထားပါ
ပန်းကန်လုံးထဲမှာ ဘဲသားဆန်ပြုပ်ကို မိမိ လိုသလောက် ထဲ့ပေးကာ သောက်ကာနီးမှ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နှင့် ကြက်သွန်မိတ်ဖြူးပြီး သောက်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:10 am 1 comment:
ရံဖန်ရံခါမှ စားတတ်ပေမဲ့ ၀က်နံရိုးဟင်းက ချက်တတ်ရင် အရမ်းစားလို့ကောင်းတာမို့လို့ ထမင်းမြိန်မြိန် စားလို့ရအောင် မာမာပြင်ဆင်ပြီး ချက်ထားတဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
၀က်နံရိုး - 500 g
ကြက်သွန်ီ - အနေတော် တစ်လုံး
စပါးလင် - တစ်လက်မခန့်
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မောက်မောက်တစ်ဇွန်း
၀က်နံရိုးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး တစ်လက်မလောက် အတုံးလေးများ တုံးပေးထားပါ
၀က်နံရိုးများကို ဇလုံတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး နနွင်းမှုန့် ဆား ငံပြာရည် အချိုမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ပြီး အရသာဝင်အောင် ၁၀မိနစ်လောက် နှပ်ထားပါ
ချင်း စပါးလင် ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့် ရောပြီး ထောင်းထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆို ဇောက်နက်သော အိုးကိုအပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ
ဆီသတ်နံ့မွှေးလာတာနဲ့ ၀က်နံရိုးကို ထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ
၀က်နံရိုး အသားများ မာလာမှ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
ပထမ တစ်ရည်ခမ်းပြီး နောက်တစ်ရည် ထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
ရေခမ်းပြီး ဆီပြန်တာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:48 am2comments:
ဂေါ်ရခါးသီးဆို ဟင်းချက်စားစား ကြော်စားစား ပြုပ်တို့တို့ အရသာစုံအောင် လုပ်စားလို့ရတာမို့ ဒီတစ်ခါတော့ ကြက်ဥနဲ့မွှေကြော်လေး ကြော်ထားပါတယ် သဘာဝ အရသာကိုက ချိုပြီးသားမို့ အများကြိုက်ကြတဲ့ အသီးကြော်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂေါ်ရခါးသီးကို အခွံခွာပြီး ရှည်ရှည်အမြှောင်းရအောင်လှီးပြီး ရေဆေးကာ စစ်ထားပါ
ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီနှင့်နနွင်းကို ထည့်ပေးပါ
ဆီ အငွေ့တက်လာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကို နွမ်းအောင် ကြော်လိုက်ပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းတာနဲ့ ဂေါ်ရခါးသီးကို ထည့်မွှေပါ
၂မိနစ်ကျော်ကျော်လောက် အဖုံးအုပ်ထားပြီး ဂေါ်ရခါးသီး နွမ်းလာတာနဲ့ ဆားနှင့်အချိုမှုန့် ထည့်မွှေပါ
ပြီးတာနဲ့ ဂေါ်ရခါးသီးကို ဘေးတွန်းထားပြီး ကြက်ဥကို ဖောက်ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါ
ကြက်ဥကြက်တာနဲ့ ဂေါ်ရခါးသီးနှင့် ရောမွှေပေးပြီး အရသာမြည်းကာ လိုသလိုပြင်ပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:41 am 1 comment:
ဒီနေ့တော့ ပဲပေါင်းလေး လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပဲကြီးဟင်း ချက်တဲ့ပဲကို နူးနေအောင်ပြုပ်ပြီး ပဲပေါင်းလုပ်ထားတာပါ တစ်ခြားပဲတွေကို လုပ်လို့ရပေမဲ့ ဒီပဲလောက်တော့ အရသာက မကောင်းလှပါဘူး။
ကလေးလူကြီး နှစ်သက်မဲ့ ပဲပေါင်းဟင်းမို့လို့ ပဲပေါင်း စိမ့်စိမ့်လေး လုပ်စားနိူင်အောင် မာမာပြင်ဆင်ထားတဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပဲကြီး LIMA BEANS - 500 g
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံး
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ
ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ ရေကိုပဲရဲ့အထက် လက်တစ်ထွာလောက် မြုပ်အောင်ထည့်ပြီး တစ်ညသိပ် ရေစိမ်ထားပါ
နောက်နေ့မနက်မှာ ပဲများပွလာပါက အခွံကို တစ်စေ့ချင်း ကုန်တဲ့အထိ ထွင်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက် ရေဆေးကာ ပါးပါလှီးထားပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီကို ထည့်ကြော်ပြီး ကြွတ်လာတာနဲ့ ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ဇောက်နက်နက် အိုးထဲမှာ ပဲနှင့်ရေများကိုထည့်ပြီး နူးအိနေအောင် ပြုပ်ပေးပါ
ပဲများ နူးအိလာပါက ဇွန်းနှင့် ဖိဖိပြီး ချေထားပေးပါ
ကြက်သွန်ကြော်လို့ ပိုတဲ့ဆီထဲမှာ ပြုပ်ပြီးချေထားသော ပဲများကို ထည့်ကြော်ပေးပါ
ပဲများအိလာပြီး မွှေးလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ကြော်ထားသော ကြက်သွန်နီကြော် ကို ပဲပေါင်းအပေါ်မှ ဖြူးပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
အာဗျဲခြောက်ဆိုရင် တချို့က အနံ့မကြိုက်လို့ မစားကြပါဘူး အာပြဲခြောက်က မချက်တတ်ရင် အနံ့တော်တော်ပြင်းပါတယ် မာမာကတော့ အဲဒီလို အနံ့တွေ ပျောက်သွားအောင် ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီတို့နဲ့ ကြော်လိုက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာပြင်ဆင်ပြီး ကြော်တဲ့နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
အာဗျဲခြောက် - 100 g
အာဗျဲခြောက်ကို အကောင်လိုက် ရေဆေးပြီး လက်နှစ်ဆစ်လောက် အနေတော် တုံးပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက်ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါး လှီးပေးပါ
ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး နနွင်းမှုန့် အရင်ထည့်ကာ ငါးခြောက်ကို ကြွတ်တဲ့အထိကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ
ငါးခြောက်ကြော်တဲ့ ဆီထဲမှာဘဲ ကြက်သွန်နီကို အရင် နွမ်းအောင်ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းတော့မှ ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ကာ ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ အနံ့သင်းလာတာနဲ့ ငရုတ်သီး လုံးခြမ်းခွဲကို ထည့်ကြော်ပါ
ငရုတ်သီးကြော်ချိန် မကြာစေဘဲ ၅ချက်လောက် ဆက်တိုက်မွှေပြီးတာနဲ့ ငါးခြောက်ကြော် အချိုမှုန့်တို့ ထည့်မွှေပြီး မီးပိတ်ပေးပါ
ထမင်းမိန်စေတဲ့ ငါးခြောက် အစပ်ကြော်ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:53 am 1 comment:
ကွကျဥ ခဉျြရညျဟငျးကို အမြိုးမြိုးခကျြကာ စားကွတဲ့အထဲက ဒီခကျြနညျးလေးက ကွကျဥကို ပွုပျပွီး အခှံခှာကာ အလုံးလိုကျ ကွျောပွီးမှ ပွနျခကျြတဲ့ နညျးလေးပါ ခကျြနညျးကတော့ ကွကျဥကို ကွျောပွီးမှ ခကျြတာကလှဲရငျ ခကျြနကြေ နညျးအတိုငျးဘဲ ခကျြထားပါတယျ။
ပွုပျပွီးအခှံခှာထားသော ဘဲဥ( သို့)ကွကျဥ - ၆လုံး
အခှံခှာပွီး ရှဈစိတျစိတျကာ ရဆေေးထားသောအာလူး - အနတေျော ၃လုံး
ညကျနအေောငျထောငျးထားသော ကွကျသှနျနီ - အနတေျော တဈဥ
ညကျနအေောငျထောငျးထားသော ကွကျသှနျဖွူ - အမှာကွီးကွီး၃မှာ
ညကျနအေောငျထောငျးထားသော ခငျြး - လကျတဈဆဈရေ
စိမျထားသော မနျကညျြးသီးမှညျ့ - ကှမျးသီးဆံလုံးလောကျ
ငါးငံပွာရညျ - ထမငျးစားဇှနျး ၂ဇှနျး
ဆီ - ထမငျးစားဇှနျး ၅ဇှနျး
ဆီပူလာတာနဲ့ ကွကျဥမြားကို အပျေါယံတငျးသှားအောငျ ကွျောပွီး ဆယျထားပါ
ကွကျဥကွျောထားသော ဆီထဲမှာဘဲ ထောငျးထားသော ကွကျသှနျနီ ကွကျသှနျဖွူ ခငျြး ငရုတျသီးမှုနျ့တို့ထဲ့ကာ မှေးလာတဲ့ထိ ဆီသတျပေးပါ
ငရုတျသီးနံ့မှေးလာတာနဲ့ အာလူးနှငျ့ ငါးငံပွာရညျ တခါထဲထညျ့ပွီး ဆီသတျပေးပါ
ငံပွာရညျနံ့ သငျးလာပွီး အာလူးအရောငျပွောငျးလာတာနဲ့ ရမွေုပျအောငျထဲ့ပွီး အရသာမှုနျ့နှငျ့ ဆားထဲ့ကာ အာလူးနူးအောငျတညျပေးပါ
အာလူးနူးလာတာနဲ့ ကွကျဥကွျောပွီးသားနဲ့ မနျကညျြသီးးမှညျ့အရညျထဲ့ကာ ရဆေူအောငျ ဆကျတညျပွီး ဆီကနျြရကေနျြထားပွီး မဆလာအုပျပေးကာ မီးပိတျပေးနိုငျပါပွီ။
Posted by Tuumar at 2:12 pm 1 comment:
သရက်သီးစိမ်းသနပ် လုပ်နည်းလေး မေးထားလို့ သရက်သီးစိမ်း သနပ်လုပ်ပြီး မာမာပြင်ဆင်တဲ့ နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တယောက်နဲ့တယောက် ပြင်ဆင်ပုံခြင်း တူချင်မှ တူပါလိမ့်မယ် မာမာကတော့ စိတ်ထဲမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ မာမာ့အမေ ပြင်ဆင်တဲ့ နည်းနဲ့ဘဲ လုပ်ထားပါတယ် စားလို့ကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ် သရက်သီးသနပ် တမျိုးထဲနဲ့ကိုဘဲ ထမင်းစားလို့ရအောင် ကောင်းလွန်းတဲ့အတွက် မာမာပြင်ဆင်တဲ့နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
သရက်သီးစိမ်း - အလုံးကြီးကြီး 600 g ခန့်(လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သရက်သီးစိမ်းကို သုံးပေးပါ)
မုန့်ညှင်းစေ့ - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
နံနံစေ့ - ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း
ဇီယာစေ့ - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခပ်မောက်မောက်
လေးညှင်း - ငါးပွင့်
သစ်ဂျပိုးခေါက် - တလက်မခန့်
ဆား - ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း (သရက်သီး အရသာနယ်ရန်)
ဆား - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း (လှော်ရန်အတတွ်)
ကြက်သွန်ဖြု - အမွှာကြီးကြီး ၇မွှာ (သို့) မိမိနှစ်သက်သလောက်
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း နှစ် ဇွန်း
ဇီယာစေ့ နံနံစေ့ လေးညှင်းပွင့်နှင့် သစ်ဂျပိုးခေါက်တို့ အလွယ်တကူ မရှိပါက ရိုးရိုးမဆလာကို သုံးနိူင်ပါတယ်။
သရက်သီးကို မခွံမခွာပဲ အညှာမှဖြတ်ကာ ဇကာတခုထဲမှာ ဇောက်ထိုးထားပြီး ထည့်ပေးကာ သရက်စေးများ ကုန်တဲ့အထိ စစ်ထားပေးပါ
အစေးကုန်သွားတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး သရက်သီးကို ကြွတ်ကြွတ်လေး ဖြစ်စေရန် တနာရီလောက် စိမ်ထားပါ
ရေစိမ်ပြီး ရေခြောက်အောင် paper towelနှင့် သုတ်ပေးကာ ထက်ခြမ်းခွဲပြီး သရက်စေ့ကို ထုတ်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ပုံပါအတိုင်း အနေတော် အတုံးလေးတွေ တုံးပေးပါ
ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ လှီးထားသော သရက်သီးများနှင့် ဆားတို့ကို ထည့်ပေးပြီး သမသွားအောင် နယ်ပေးကာ glad wrap နှင့် လုံအောင်အုပ်ပေးပြီး အဖုံးအုပ်ပြီး အနည်းဆုံး ငါးနာရီလောက် နှပ်ထားပေးပါ
သရက်သီး သနပ်လုပ်ရန် မဆလာအတွက် ပြင်ဆင်ပုံ
ဇီယာစေ့ နံနံစေ့ သစ်ဂျပိုးခေါက် လေးညှင့်ပွင့်တို့ကို ဒယ်အိုးထဲမှာ ထည့်ပေးပြီး အစေ့လေးတွေ တဖျောက်မြည်လာတဲ့အထိ လှော်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပြီး ညက်နေအောင် ကြိတ်ပေးပါ
ကြိတ်စက်မရှိပါက ငရုတ်ဆုံထဲမှာထည့်ပြီး ညက်နေအောင်ထောင်းကာ မဆလာ လုပ်ထားပါ
သရက်သီး သနပ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ပုံ
အဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ သရက်သီးစိမ်း သနပ်လုပ်ရန် စပ်ထားသော မဆလာကို ပြင်ထားပါ
မုန့်ညှင်းစေ့ကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး တဖျောက်ဖျောက် မြည်လာအောင် လှော်ထားပါ
လှော်ရတာ အချိန်မရပါက မုန့်ညှင်းစေ့ကို ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပေးပြီး တမိနစ်ခန့် အပူပေးပါ
ဆားကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး အနည်းငယ် ညိုသွားအောင် လှော်ပြီး အအေးခံထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ အစိတ်လေးတွေ စိတ်ထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ဆားရည်စိမ်ထားသော သရက်သီး ဇလုံထဲမှ ဆားရည်များကို သွန်ပေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
ဆီကို ဒယ်အိုးထဲ ထည့်ပြီး ပူလာအောင် အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ မီးဖိုပေါ်မှ ဖယ်ကာ ဇလုံတလုံးထဲမှာ ဆားရည်သွန်ထားသော သရက်သီးစိမ်း ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် မုန့်ညှင်းစေ့ အပူပေးထားသေဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်းခန့် ဆားနှင့် ကြိတ်ထားသော မဆလာတို့ကို သမသွားအောင် ရောမွှေထားပါ
အရသာ သမသွားတာနဲ့ ပိုနေသောဆီကို အရသာ စပ်ထားသာ သရက်သီး ဇလုံထဲ လောင်းထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
အားလုံး အရသာ သမသွားတာနဲ့ ပုလင်းသန့်သန့်ထဲမှာ သရက်သီးကို ဖိသိပ်ထည့်ပေးပြီး ဆီမြုပ်အောင် ထည့်ပေးကာ အအေးခံ ထားပေးပါ
အရက်သီးများ အေးသွားတာနဲ့ အဖုံးလုံအောင် ပိတ်ပေးပြီး နေငါးရက်လောက် လှန်းပေးထားပါ
ပြီးတာနဲ့ သရက်သီးစိမ်း သနပ်ပုလင်းကို အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားပေးကာ စားခါနီးတိုင်း ဇွန်းသန့်သန့်လေးနဲ့ ခပ်ပေးပြီးမှ စားသုံးဖို့ ခပ်ယူပေးပါ
ခပ်သည့်ဇွန်း မသန့်ရှင်းပါက သရက်သီး သနပ်ထဲမှာ မှိုများအလွယ်တကူ တက်သွားနိူင်တဲ့အတွက် ဇွန်းသန့်သန့်နှင့် ခပ်ဖို့ သတိထားစေချင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by Tuumar at 5:18 pm 1 comment:
ပုဇွန်ချဉ် လုပ်ထားတာ ရလာပြီဆိုတော့ ပုဇွန်ချဉ်သုပ်လေး စားချင်လာခဲ့တယ် ပုဇွန်ချဉ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာ အဆင်ပြေလွန်းလို့ ပုဇွန်ချဉ် လုပ်နည်းနဲ့ သုပ်နည်းလေးကို မာမာပြင်ဆင်တဲ့ နည်းအတိုင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ပုဇွန်ဘော့ချိတ် (သို့) ပုဇွန်ခေါင်းချိုး - 500 g
ဘာစမာတီဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး တစ်ဗူး
ပုလင်းသန့်သန့် - တစ်လုံး
ပုဇွန်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အခွံမခွာဘဲ ခေါင်းဘဲဖြုတ်ပေးပါ
ဆန်ကို ရေဆေးပြီး ခပ်မာမာချက်ကာ အအေးခံ ထားပေးပါ
ထမင်းအေးတော့မှ ပုဇွန်ချဉ်တည်ဖို့ကို စတင်ပြင်ဆင်ပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ဇလုံထဲမှာ ဆားနှင့် ထမင်းတို့ကို ခပ်နာနာ နယ်ပေးပါ
နယ်ပြီးသော ထမင်းထဲမှာ ပုဇွန်ကို ထည့်နယ်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ နယ်ထားသော ပုဇွန်များကို ပုလင်းသန့်သန့်ထဲ ဖိသိပ်ပြီး ထည့်ပေးပါ
ပုဇွန်အပေါ်မှာ နေရာလွတ်နေပါက အသုံးမပြုရသေးသော ပလပ်စတစ်စများ ထိုးထည့်ပြီး ဗူးဖုံးကို လုံအောင်ပိတ်ထားပါ
မာမာကတော့ ပုလင်းကို အပြည့်သိပ် ထည့်ထားတဲ့အတွက် ပလပ်စတစ်များ မထည့်ဘဲ ထားပါတယ်
ပုဇွန်ထည့်ထားသော ပုလင်းကို အိမ်မှာ အခန်းအပူချိန် အများဆုံးရှိတဲ့ မီးဖိုဆောင် အခန်းမှာ ထားပေးပါ
သုံးရက်လောက်နေရင် ပုဇွန်ချဉ် တည်ထားသော ပုလင်းထဲမှာ အရည်များ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
ထွက်လာတဲ့ အရည်များကို ဗူးကိုမှောက်ပြီး အဖုံးအနည်းငယ် ဟပေးကာ အရည်များကို စစ်ထားပေးပါ
လေးရက် ငါးရက်လောက်နေရင် ပုဇွန်ချဉ်ကို စားလို့ရပါပြီ။
ပုဇွန်ချဉ်များကို ပုလင်းထဲက ထုတ်ပေးကာ ထမင်းများကို ဖယ်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက် ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ရေနှင့် ထပ်ပြီးဆေးကာ ရေစစ်ထားပါ
ငရုတ်သီးစိမ်းကို ရေဆေးပြီး စားနိုင်သလောက် လှီးထားပါ
ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ ပုဇွန်ချဉ် ကြက်သွန်နီ နံနံပင် အရသာမှုန့် ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ပဲဆီတို့ ထည့်ပေးပြီး အရသာ သမအောင် နယ်ပေးပြီးပါက ပုဇွန်ချဉ်သုပ် မွှေးမွှေးလေးကို ရပါပြီ
ပုဇွန်ချဉ်မှာ အငံပါပြီးသားမို့လို့ ဆားထည့်ရန် မလိုပါ။
Posted by Tuumar at 3:47 pm 1 comment:
ဟင်းအမယ် တစ်မျိုးထဲ ချက်မယ်လို့ စိတ်ကူးတဲ့နေ့ဆိုရင် အခုလို ချိုချဉ်ကြော်လေး ကြော်တတ်ပါတယ် အပြင်အစာတွေ သိပ်မစားတတ်လေတော့ အခုလို တွေးရင်းတောရင်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးက ထမင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ မြိန်စေတတ်တာမို့လို့ ကြော်စားနိူင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး - ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံး
ပဲသီး - သုံးတောင့်
တရုတ်နံနံ - နှစ်ပင်
ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး - ငါးလုံး
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း
ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း သုံးဇွန်း (ချိုချဉ်ကြော်ရန် )
ဆီ - လိုသလောက် သုံးပေးပါ ( ကြက်သားကြော်ရန် )
ကြက်သားကို ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါး အတုံးလေးတွေ လှီးထားပါ
လှီးထားသော ကြက်သားကို ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ ပြောင်းကော်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ရေအနည်းငယ်နှင့် ခပ်ပြစ်ပြစ် ဖျော်ပြီး နယ်ထားပါ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ ဆီပူလာပါက ကြက်သားကို ဇွန်းနှင့်ခပ်ပြီး တစ်တုံးခြင်း အိုးဆန့်သလေညက် ထည့်ပေပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြက်သားတုံးလေးမျာ ရွှေဝါရေင် သန်းလာလျှင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ အတုံးလေးများရအောင် လှီးထားပါ
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေဆေးကာ လေးစိတ်စိတ်ထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ အရှည်လိုက် လှီးထားပါ
ပဲသီးကို ရေဆေးပြီး အနေတော် လှီးထားပါ
တရုတ်နံနံကို ရေဆေးပြီး တလက်မစီလောက် လှီးထားပါ
ချ.်ရီခရမ်းချဉ်သီးကို အလုံးလိုက် ရေဆေးထားပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို မိနစ်ဝက်လောက် ကြော်ပေးပါ
မိနစ်ဝက်ပြည့်တာနဲ့ မုံလာဥနီ နှင့်ပဲသီးတို့ကို ထည့်ပြီး တစ်မိနစ်လောက် ကြော်ပေးပါ
တစ်မိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ ကြက်သားကြော် ဆား သကြား ခရမ်းချဉ်သီးဆော့တို့ထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြော်ချိန် တစ်မိနစ်လောက် ရပြီဆိုတာနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် တရုတ်နံနံတို့ ထည့်မွှေပေးပြီး ချိုချိုချဉ်ချဉ် အစိမ်းကြော်လေးကို ထမင်းပူပူလေးနဲ့ လိုက်ဖက်စွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:14 pm No comments:
သီးရွက်စုံလို့ ပြောပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ အိမ်မှာရှိတာတွေ ပြစ်ပျက်ထည့်ပြီး ချက်လိုက်တဲ့ ဟင်းတမယ်ပါ ဟင်းတွေကို ဘာစတိုင် ညာစတိုင်ဆိုပြီး ချက်ရတာထက် မိသားစု ခံတွင်းလိုက်စေမဲ့ အစာလေးတွေကို ချက်ရတာ စိတ်ထဲမှာ ပီတိတော်တော်လေး ဖြစ်ရတာမို့ မာမာချက်တဲ့ မာ့မာ့စတိုင် သီးစုံ ပဲချဉ်ရည်ဟင်း ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အာလူး - ခပ်ကြီးကြီး တလုံး
ပဲတောင့်ရှည် - ၅တောင့်
ရုန်းပတေသီး - ၅တောင့်
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းခွဲ (သို့မဟုတ်)
ကုလားပဲဆန်ကို ရေဆေးပြီး ရေမြုပ်အောင်ထည့် နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပဲအရမ်း မနူးအာင် ပြုပ်ထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ လက်တဆစ် အရွယ်တုံးထားပါ
ကြက်သွဖြူ နီ ချင်းတို့ကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ ငရုတ်သီးမှုန့်တို့နဲ့ရောပြီး ထောင်းထားပါ
ပြီးတာနဲ့ ဟင်းချက်ရန်ပြင်ထားသော အသီးအရွက်များကို ရုံးပတေသီးမှလွှဲပြီး ထည့်ဆီသတ်ပါ
အသီးအရွက်များ ထည့်ပြီးတာနဲ့ဆား(သို့) ငံပြာရည်ကို တခါထဲထည့်မွှေပေးပါ
အသီးများနည်းနည်း နွမ်းလာတာနဲ့ ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးထဲပြောင်းထည့်ပြီး ရေကို တရုတ်ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန် ၂လုံးစာထည့်ပြီး အသီးများနူးအောင် တည်ပေးပါ
အသီးများ နူးများလာတာနဲ့ ပြုပ်ထားသော ပဲကိုထည့်ပြီး ရေစိမ်ထားသော မကျည်းမှည့်ကို လက်နဲ့ဖျော်ပြီး မကျည်းရည်ထည့်ပေးပါ
ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူပါက. ရုန်းပတေသီးနှင့် အရသာမှုန့်ထည့်ပြီးမွှေပေးကာ အရသာ မြည်းပေးပါ
အရသာကို လိုသလိုပြင်ပြီးပါက သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:49 pm No comments:
ငါးပြေမ အဆင်သင့်ချက်ရုံ ဗူးလေးတွေနဲ့လာတာမို့ ကိုင်ရခုတ်ရတာ သက်သာတဲ့အတွက် အချဉ်ဆီပြန်ဟင်းလေး ချက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငါးပြေမ- 500 g
ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ထောင်းထားသော ချင်း - လက်တစ်ဆစ်ခန့်
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁၀ တောင့်
သန့်စင်ပြီး ရေစင်အောင် ဆေးထားသောငါးပြေမကို ဇလုံကျယ်ကျယ်ထဲထဲ့ပါ
ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာနှင့်ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းတို့ထဲ့ပါ
နနွင်းမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံနှင့် အရသာမှုန့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ထဲ့ပါ
ဆီသတ်နံ့မွှေးလာတာနဲ့ အရသာနယ်ထားတဲ့ ငါးကိုထဲ့ပြီး ငါးအသားမာလာတဲ့ထိ အိုးကိုလှုပ်ပေးပါ
ငါးအသားမာတာနဲ့ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းထဲ့ပြီး အိုးအဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပေးပါ
ရေဆူလာတာနဲ့မကျီးမှည့်အနှစ် ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်တို့ကိုထဲ့ပြီး ဆီပြန်တဲ့အထိတည်ပေးပါ
ဆီပြန်လာပါက အရသာမြည်းပြီး နံနံပင်အုပ် မီးပိတ်ပေးပါ
နံနံပင်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ချဉ်ငံစပ်အရသာကောင်းတဲ့ ငါးပြေမ ဆီပြန်ဟင်းလေးရပါပြီ
Posted by Tuumar at 10:06 pm No comments:
ဒီနေ့တော့ လွယ်ကူမြန်ဆန် ချက်ရတာလဲမြန် စားရတာလဲ စားလို့ကောင်းလွန်းတဲ့အတွက် မာမာပြင်ဆင်ပြီး ချက်ထားတဲ့ ငါးသေတ္တာဟင်း ချက်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ငါးသေတ္တာ - ဗူးကြီး တစ်ဗူး
အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - ကြီးကြီး တစ်လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး - နှစ်လုံး ( တလုံးကို လေးစိတ် စိတ်ထားပါ)
ဆီကိုအပူပေးပြီး ကြက်သွန်နီကို နွမ်းအောင်ကြော်ေးပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းတာနဲ့ ငါးသေတ္တာနှင့် ဆားတို့ထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာ ရေဆူအောင်တည်ပေးပါ
ရေဆူလာတာနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်မွှေပြီး တစ်မိနစ်လောက် တည်ပေးရင် ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:51 pm No comments:
ခရမ်းသီးနှပ်ဆိုရင် ထမင်ြးမိန်ရာ ဟင်းတစ်မျိုးလို့ ထင်နေမိလို့ ခရမ်းသီးရတိုင်း နှပ်ချက်လေး ချက်ပြီး စားဖြစ်တာက များပါတယ် အခုတော့ ထောပတ်ခရမ်းသီးကို ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ နှပ်ထားလို့ ချက်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ထောပတ်ခရမ်းသီး - ၂လုံး
ခပ်နုတ်နုတ် စဉ်းထားသော ကြက်သွန်နီ ဥကြီးကြီး - တစ်ဥ
ခပ်နုတ်နုတ် စဉ်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး သုံးမွှာ
ခရမ်းသီးကို အညှာဖြတ် အခွံခွာကာ လေးစိတ် စိတ်ပေးပြီး ရေနာရီဝက်လောက် စိမ်ထားပါ
အညိုရောင်အရည်များ ထွက်သွားပါက လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုတ်ပြီး ရေကို ညှစ်ပြီး ဖယ်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ငရုတ်သီးမှုန့် ဆား အရသာမှုန့် ပုဇွန်ခြောက်တို့ကို ရောနယ်ပေးထားပါ
အောက်ခြေမကပ်သော ဇောက်နက်နက်အိုး တလုံးထဲမှာ ခရမ်းသီး ဆီနှင့် ရေမမြုပ်တမြုပ်ထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပေးပါ
ရေ မခမ်းခင် အိုးကို အသာလှုပ်ပေးပြီး ဆီကျန်ရေကျန် အနေအထားရအောင် တည်ပေးပါ
ခရမ်းသီး နူးပါက အရသာမြည်းပြီး ဆီကျန်ရေကျန်ချိန် မီးပိတ်ပေးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:38 pm No comments:
သဘာဝ အချိုအရသာနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ ပြောင်းဖူးထောင်းကြော်လေး ကြော်စားဖြစ်လို့ ကြော်နည်းနဲ့အတူ လာပို့ခဲ့ပါပြီ မာမာကတော့ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ညက်နေအောင် စိတ်ရှည် လက်ရှည်ထောင်းထားပေမဲ့ အချိန်မရလို့ မထောင်းနိုင်ရင် ဗလင်ဒါထဲထည့်ပြီးကြိတ်နိူင်ပါတယ်။
ပြောင်းဖူး - ငါးဖူး (အစေ့ထွင်ပြီးသား )
ရေ - ပြောင်းဖူးမြုပ်အောင်ထည့်ပါ
ဆီပူပူမှာ ထောင်းထားတဲ့ ပြောင်းဖူးထောင်းနှင့် ဆားကိုထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
ပြောင်းဖူးစေ့ထည့်ပြီး တစ်မိနစ်လောက် ရတာနဲ့ ဆားနှင့်ရေကိုထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
ပြောင်းဖူးနူးပြီး အရည်မခမ်းခင် အချိန်မှာ အရသာမြည်းကာ လိုသလိုပြင်ပေးပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:27 pm 1 comment:
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အမျိူးမျိုး လုပ်စားကြတဲ့ အထဲက ဒီတစ်ခါတော့ ပုဇွန်အစိုကို ထောင်းပြီး ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ကြော်ထားလို့ ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီး - ခပ်ကြီးကြီး နှစ်လုံး
ပုဇွန်အစို - ပုဇွန်ထုတ် ခပ်ကြီးကြီး သုံးကောင်
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံပုံတစ်ပုံ
ခပ်နုတ်နုတ် စဉ်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး နှစ်မွှာ
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အလယ်မှ အစေ့များဖယ်ကာ အလုံးလိုက် ခပ်ထူထူလှီးပေးပါ
ပုဇွန်ထုတ်ကို အခွံခွာပြီး ကြောဘက်မှ အမဲကြောင်းထုတာကာ ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ
ပြီးတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီကို နွမ်းသွားအောင် ကြော်ပေးပါ
နွမ်းပြီဆိုတာနဲ့ ပုဇွန်ထောင်းကို ၂မိနစ်လောက်ထည့်ကြော်ပြီ ကြက်ဟင်းခါးသီးထည့်ကြော်ပါ
ဆား အရသာမှုန့်တို့ ထည့်မွှေပြီး တမိနစ်လောက်ပြည့်တာနဲ့ ရေ ထမင်းစားဇွန် ၃ ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီး အိုးအဖုံးမအုပ်ဘဲ ကြော်ပေးပါ
ဟင်းအိုးမကပ်စေရန် ကြက်ဟင်းခါးသီးများကို မမွှေဘဲ လှုပ်လှုပ်ပေးပါ
ဆီသံကြားပြီး ရေခမ်းလာတာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး စားဖို့ပြင်ဆင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:46 pm No comments:
ဆန်ကြာဇံကြော်လေး ကြော်ဖြစ်လို့ သိပ်မထူးဆန်းတဲ့ အိမ်ကြော်နည်းလေးအတိုင်း ကြော်ထားပေမဲ့ စားလို့ကောင်းလို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၅နာရီခန့်ရေမြုပ်အောင် စိမ်ထားသောဆန်ကြာဇံ - 150 g
ရေစိမ်ထားသော ကြာဇံကိုရေစစ်ပြီး ငံပြာရည် ပဲငံပြာရည် သကြားတို့နဲ့ရောပြီးနယ်ထားပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူနံ့ မွှေးလာပါကပဲသီး မုံလာဥနီ ပန်းဂေါ်ဖီတို့ကို အရသာမှုန့်ထဲ့ပြီး အားလုံးကိုရောကာ နဲနဲနွမ်းအောင်မွှေပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ကြာဇံထဲ့ပြီးရောကြော်၍ ကြာဇံပျော့လာပြီဆိုတာနဲ့ဘေးကိုတွန်းထားပြီး ကြက်ဥကိုဖောက်ထည့်ကာ အနှစ်ဖောက်ပြီး တ၀က်ကျက်အောင်ကြော်ပြီး တရုတ်နံနံ ထည့်အားလုံးကို ရောမွှေကာ အရသာမြည်းပေးပါ အရသာအနေတော်ဆိုရင်ကြက်ဥ ကြာဇံကြော်လေး ရပါပြီ
Posted by Tuumar at 2:53 pm No comments:
ခေါက်ဆွဲ အလုံးလေးတွေ ကြော်စားရတာ ရိုးလာတော့ ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲပြားလေးဘက် တခါ လှည့်ကြော်ပါတယ် ကြက်ဥခေါက်ဆွဲမို့ အရသာကတော့ မကြော်ခင်ထဲက ပြည့်ဝနေပြီးသားပါ အသားမစားတဲ့ သမီးလေးပါ စားလို့ရအောင် ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီး အားဖြည့်ထားပါတယ် ကြော်နည်းကတော့ အိမ်ကြော် ကြော်နေကျ ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ နှစ်သက်ရာအသီးအရွက်လေး ထည့်ပြီးကြော်နိူင်ပါတယ်။
ပျော့သွားအောင် ပြုပ်ပြီး ရေဆေးကာ ရေစစ်ထားသော ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲအပြား - 100 g
အနေတော် လှီးထားသော မုံလာဥနီ - အနေတော် တစ်ဥ
အနေတော် လှီးထားသော ဂေါ်ဖီ - အနည်းငယ်
အနေတော် လှီးထားသော ဘရိုကိုလီ - ၅ခက်ခန့်
ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၂ မွှာ
တစ်လက်မခန့်အရွယ် လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - ၂ခက်
နှမ်းဆီ - လက်ဖက်ဇွန်း သုံးပုံ တစ်ပုံ
ပဲငံပြာရည်အနော် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ရေနွေး 8 cups လောက်ကို ဆူအောင်တည်ပေးပြီးမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထည့်ပြုပ်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ မွှေးလာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီ ပန်းဂေါ်ဖီ ဘရိုကိုလီ ပဲသီး ဂေါ်ဖီ မုံလာဥနီတို့ကို ထည့်ကြော်ပေးပါ
အသီးအရွက်များနှင့်ခေါက်ဆွဲကို သမသွားအောင် တမိနစ်လောက် မွှေပြီးတာနဲ့ ခေါက်ဆွဲကို ဘေးတွန်းထားပြီး ကြက်ဥကို ထည့်ကြော်ပါ
ကြက်ဥကျက်တာနဲ့ ခေါက်ဆွဲနှင့်ရောမွှေပြီး တရုတ်နံနံနှင့် နှမ်းဆီထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ သတ်သတ်လွတ် ခေါက်ဆွဲကြော်လေး ရပါပြီ
Posted by Tuumar at 2:50 pm2comments:
အသားမစားခငျြတဲ့ ရကျတှဆေိုရငျ ကွကျဥကိုပွုပျပွီး သုပျလိုကျရငျ အဆငျပွတေဲ့ ထမငျးဝိုငျးလေး ဖွဈသှားတတျ သလိုပါဘဲ ပဲဆီစိမျးရဲ့ အနံ့မှေးမှေးလေးက ထမငျးကို မွိနျစတော ဖွဈတဲ့အတှကျ ကွကျဥသုပျနညျးလေးကို မြှဝေပေးလိုကျပါတယျရှငျ။
ကွကျဥကို ကကျြအောငျပွုပွီး အခှံခှာကာ ခပျထူထူ လှီးထားပါ
ကွကျသှနျနီကို အခှံခှာပွီး ရဆေေးကာ ခပျပါးပါးလှီးပွီး ရတေဈထပျ ထပျဆေးပေးပါ
သံပုရာသီးကို ရဆေေးပွီး တစိတျ စိတျထားပါ
ဇလုံတဈလုံးထဲမှာ ကွကျဥ ကွကျသှနျနီ ဆား သံပုရာရညျ အခြိုမှုနျ့ နှငျ့ ဆီတို့ ထညျ့ပွီး ခပျဖှဖှလေး နယျပေးပါ
အားလုံး အရသာ သမသှားပါက ကွကျဥသုပျ မှေးမှေးစိမျ့စိမျ့လေးကို စားပှဲပွငျပေးနိူငျပါပွီ
ဒီနေ့တော့ မိသားစုအကြိုက် သတ်သတ်လွတ် ဟင်းလေးချက်ဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းဖူးဆို ပြုပ်လဲကြိုက် ကြော်လဲကြိုက် မီးဖုတ်ရင်လဲကြိုက်ကြလေတော့ အမျိုးစုံအောင် လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းဖူးကို လက်ဖက်လေးနဲ့ရောပြီး သုပ်စားရင်လဲ စွဲမက်စရာပါ။
အရမ်းကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးရနိူင်ပြီး အကုန်အကျလဲ နည်းသလောက် ထမင်ြးမိန်တဲ့ ဟင်းတစ်မယ်ပါ ချိုစိမ့်စိမ့်လေးမို့ အကြိုက်တွေ့စေဖို့ ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ ခပ်သေးသေး - တစ်ခြမ်း (ပါးပါးလှီးထားပါ )
နနွင်းမှုန့် -လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံ
ပြောင်းဖူးကို ရေဆေးပြီး အစေ့ထွင်ထားပါ
ကြက်သွန်နီကို အလုံးလိုက် အခွံခွညပြီး ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ဆီပူပူမှာ နနွင်းမှုန့်ကို အရင်ထဲ့ပြီး ကြက်သွန်နီကိုထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းသွားမှ ပြောင်းဖူးစေ့နှင့် ဆားတို့ကိုထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ပြောင်းဖူးကို ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ကာ တည်ပေးပါ
ရေခမ်းကာနီးပါက အားလုံရောမွှေပြီး ကြော်ပေးကာ အရသာမြည်းကာ လိုသလိုပြင်ပေးပြီး ရေခမ်းသွားပါက စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:08 am 1 comment:
ပုဇွန်တိုးပွားကြော်လို့ နံမည်လေးတပ်လိုက်တော့ ဆန်းနေသလိုပါဘဲ တကယ်တမ်းကျတော့ ပုဇွန်ထုတ်ကို အကောင်လိုက်ကြော်ရင် ဟင်းပြင်တဲ့အခါမှာ မလှမှာဆိုးလို့ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ကြော်လိုက်တော့ ဟင်းပွဲပြင်တဲ့အခါမှာ များများလေးဆိုတော့ လှသွားတယ်လို့ ထင်ရမှာပါ ကြော်နည်းကတော့ ပုဇွန်အချို ကြော်နည်း အတိုင်းပါဘဲရှင်။
ပုဇွန်ထုတ် - 300 g
သန့်စင်ထားသောပုဇွန်ကို အကောင်လိုက် ခါးဘက်မှနေ၍ ဓါးထက်ထက်နဲ့ ထက်ခြမ်းကွဲအောင် ခွဲပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ နနွင်း အရသာမှုန့် ငံပြာရည်တို့နဲ့နယ်ပြီး အရသာဝင်အောင် ၁၀မိနစ်လောက် နှပ်ထားပေးပါ
လိုအပ်တာတွေ ပြင်ပြီးပါက ဆီကိုအပူပေးပါ
ဆီပူလာပါက ကြက်သွန်ဖြူကို အနည်းငယ် နွမ်းလာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ နွမ်းလာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကိုပျော့သွားတဲ့ထိကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်များ ပျော့သွားတာနဲ့ပုဇွန်အရသာနယ်ကို ၃မိနစ်လောက်ထည့်ကြော်ပေးပါ
ပုဇွန်ကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ စားပွဲ ပြင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:55 am No comments:
ငရုတ်သီးအစပ်ဟင်း မစားနိူင်သူတွေအတွက် ချင်း ကြက်သွန်ဖြူ နနွင်းမှုန့်တို့နဲ ပြုပ်ထားတဲ့ ကြက်ပြုပ် ဟင်းလေးပါ ပြုပ်ရတာလွယ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ စားလို့ကောင်းစေဖို့အတွက် ကြက်သားကို ရွေးဖို့တော့ လိုပါတယ် တကောင်လုံးပြုပ်ရင် ရနိူင်ပေမဲ့ တကောင်လုံးမပြုပ်ဘဲ တယောက် နှစ်ယောက်စာဘဲ ပြုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရည်ခွံပါတဲ့ ကြက်ပေါင်ရင်းသားကို ရွေးပြီးပြုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဆီလုံးဝ ထည့်စရာမလိုဘဲ အရည်ခွံကထွက်တဲ့ အဆီနဲ့ကိုဘဲ အရသာပြည့်စုံတဲ့ ကြက်ပြုပ်ဟင်းလေး ရနိူင်တာမို့ ဟင်းချက်နည်းကို မျဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ပေါင်ရင်းသား - ၂တုံး
ချင်း - ခပ်ပါးပါး ၄ပြား
ကြက်သားကို ရေဆေးပြီး ဆား အချိုမှုန့် နနွင်းမှုန့်တို့နဲ့ အရသာဝင်အောင် နယ်ထားပါ
ချင်းကို အခွံခွာပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ
ကြက်သားနှင့် ချင်းကို ဇောက်နက်သော အိုးထဲထည့်ပြီး ရေမြုပ်အောင်ထည့်တည်ပါ
ပထမတရည် ခမ်းကာနီးပါက ကြက်သွန်ဖြူနှင့် နောက်ထပ်တရည်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
နောက်တရည် မခမ်းခင် အရည်မခမ်းခင် မီးပိတ်ပေးပါ
ချင်း ကြက်သွန်ဖြူနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ကြက်ပြုပ်မွှေးမွှေးလေးကို နှစ်သက်သလို သုံးဆောင် နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:29 am No comments:
ဒီနေ့တော့ အသားမလိုဘဲ ပုဇွန်ငါးပိနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီ ချဉ်ရည်လေး စားကောင်းလွန်းလို့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အခက်ချွေထားသော ပန်းဂေါ်ဖီ - တစ်ပွင့်
အနေတော်လှီးထားသော မုန့်ညှင်းစိမ်း - တစ်ပင်
ထက်ဝက်ပိုင်း လှီးထားသော ရုံးပတေသီး - ၅တောင့်
ရှမ်းနံနံ - ဆယ်ရွက်ခန့်
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
ဟင်းချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ပုဇွန်ငါးပိ - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်
မကျည်းသီး အနှစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး၂မွှာ
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသောချင်း - လက်တစ်ဆစ်
ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်အရွက်များ ဆီ နနွင်းမှုန့် ငံပြာရည် ဟင်းချိုမှုန့် ငရုတ်သီးမှုန့် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ချင်းတို့နှင့် အားလုံးကိုရောပြီး ဇောက်နက်သော အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ရောနယ်ပြီး ရေအနည်းငယ်ထဲ့ပြီး ဟင်းကိုလုံးမိအောင်တည်ပေးပါ
ရေဆူလာပြီး အသီးအရွက်များ နူးလာပါက ရေကို ဟင်းရေသောက်ပန်းကန်လုံး၂လုံးစာလောက် ထဲ့ပြီးတည်ပေးပါ
ရေဆူလာပါက. ပုဇွန်ငပိကို အရည်ဖျော်ကာ မကျီးမှည့်အနှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းနှင့် အတူထဲ့ပြီး ရေပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ
၅မိနစ်ရေလာက်ဆူပြီးပါက အပေါ့အငံမြည်းပြီး ပန်းဂေါ်ဖီချဉ်ရည်ဟင်းကို ရုံးပတေသီးနှင့် ရှမ်းနံနံအုပ်ပေးကာ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ပေးပါ
ပန်းဂေါ်ဖီ ချဉ်ရည်ဟင်းလေးကို မြိန်ယှက်စွာနဲ့ သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:08 pm 1 comment:
တစ်ခါတလေမှာ အသီးအရွက်လေးတွေချက်တိုင်း သတိထားရတာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ် အရွက်လေးတွေ မသင်ခင်မှာ အပင်လိုက်ကို ရေအရင်ဆေးပြီးမှ သင်ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဘာလို့အပင်လိုက် ရေအရင်ဆေးလဲဆိုရင် အရွက်တွေမှာကပ်နေတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေ အရင်ဆုံး စင်စေချင်လို့ပါဘဲ။
အရွက်တွေ သင်ပေးပြီးရင်လဲ ဇလုံထဲမှာ ရေနဲ့ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး အရွက်ထည့်ကာ ရေနာဝက်လောက် စိမ်ပေးပါ အခုလို စိမ်ပေးခြင်းကြောင့် အရွက်တွေမှာ ကပ်နေတတ်တဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေ ကပ်နေတာ စင်စေချင်လို့ပါဘဲ။
အရွက်ကြော်တာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ဆီသတ်ပြီး ကြော်တာဘဲမို့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကြော်လို့ရပါတယ်။
ဟင်းနုနွယ်ပင် - ၁၀ပင်ခန့်
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံ (အရွက်ကြော်ထဲထည့်ရန် )
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း (အရွက်ရေစိမ်ထဲထည့်ရန် )
ပုဇွန်ခြောက် - ဆယ့်ငါးကောင်ခန့်
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို အရင်ဆုံး အပင်လိုက် ရေဆေးပေးပါ
ရေဆေးပြီးတာနဲ့ အပင်ရဲ့ ရင့်နေတဲ့ နေရာများကို အကြောသင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ အပင်မှ အရွက်များကို အရင်ဆုံး ဖြတ်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ အပင်ကို အလယ်မှခြမ်းပြီး အနေတော် ပိုင်းဖြတ်ကာ မာနေသော အကြောမျှင်များကို ဖယ်ထားပေးပါ
ထွင်ထားသော အရွက်များကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး ရေမြုပ်အောင်ထည့်ကာ ဆားထည့်မွှေပေးပြီး အရွက်ထည့်ကာ နာရီဝက်ခန့် စိမ်ထားပါ
ထိုသိုရေ့စိမ်ထားပါက အရွက်မှာ ကပ်နေသော ပိုးကောင်လေးတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်
ပုဇွန်ခြောက်ကို ရေဆေးပြီး ရေနာရီဝက်လောက် စိမ်ထားပါ
ဆီအငွေ့ တက်လာတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီနှင့် ပုဇွန်ခြောက်တို့ကို နွမ်းရုံလေး ထည့်ကြော်ပါ
ပြီးတာနဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်များထည့်ပြီး ဆားနှင့် အရသာမှုန့်ထည့်မွှေပါ
နှစ်မိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့အရွက်များ နူးစေရန် ရေအနည်းငယ် ထည့်မွှေကာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ
ရေအရမ်းမခမ်းခင် အရသာမြည်းပြီး လိုသလို ပြင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ သံဓါတ်တွေ အများကြီပါတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်ကို ပူနေတုန်းလေး မိမိနှစ်သက်သလို နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:33 pm No comments:
Sea Food ဟငျးခြို
ကြက်အသည်းအမြစ် အာလူး ဆီလည်ရေလည်
ချဉ်ပေါင်ခါး မျှစ်ကြော် ချဉ်ငံစပ်
ပဲပင်ပေါက် ပဲပြား ကြက်ဥမွှေကြော်
ချင်း ကြက်သွန်ဖြူနှပ် ကြက်သားကြော်
သရက်သီးစိမ်း ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း ငါးပိချက်
ပဲပြား အုန်းနို့ ကြာဇံကြီး
သရက်သီး ရွှေလံဘိုငရုတ်သီး ပုဇွန်လှော်ထောင်း ငါးပိရည...
black tomato ခဉျြငံစပျအသုပျ